Kedu otu esi mepụta profaịlụ na backlink?
E nwere ọtụtụ echiche na-ezighị ezi na ụlọ ọrụ njikọ njikọ bụ nke dị nnọọ nkịtị maka ụlọ ahịa ahịa dijitalụ. N'agbanyeghi afọ ole ị nwere ahụmahụ na mpaghara a, ị gaghị ama kpọmkwem otú Google si anabata saịtị gị na ihe usoro ọchụchọ a ga-eme oge ọzọ. Naanị ndị mmepe na webmasters Google nwere ike ịmata ya - blue horseshoe logo name ideas. Naanị anyị ga-eji data anyị nwere na ahụmịhe anyị na-emetụta ọnọdụ anyị na saịtị.
E nwere ọtụtụ nkwupụta mgbe niile na echiche ọhụrụ dị iche iche banyere profaịlụ backlink na backlinks. Ka anyị tụlee ihe kachasị na ha:
"njikọ" rel = nofollow "adịghị enye ihe ọ bụla bara uru
" Rel = nofollow "bụ akara azụmaahịa pụrụ iche nke na-agwa search bots adịghị edepụta aha njikọ ma ghara igafe mmiri ọ bụla njikọta ha. Enwere otutu arụmụka maka uru nke njikọ njikọta. Ụfọdụ webmasters na-azọrọ na ọ dịghị mkpa ịmepụta njikọ dị otú ahụ, ebe ndị ọzọ na-ekwu na uru nke backlinks dofollow enweghi ike elelị.N'aka m, ọ dịghị azịza doro anya maka ajụjụ a dị ka uru ha nwere ike ịdabere. Njikọ ndị a na-ejikọtaghị aka na-etinye aka na ya dịka ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị amalite weebụsaịtị ma mee ka ọ baa ọgaranya na ọnụ ọgụgụ njikọ PR "ocheollow" dị mma. N'ihi ya, ị gaghị achọpụta na mberede na-arị elu na ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ. Echere m na Google nwere ezigbo ọrụ nke ịghọta njikọ "nofollow" n'akụkụ ahụ.
Otú ọ dị, ọ bara uru ịkpọtụrụ ụfọdụ ebe ebe njikọta njikọta nwere nnukwu mmetụta na saịtị na ọkwa na mkpokọta ebe nrụọrụ weebụ.Ebe ndị a na-agụnye weebụsaịtị ndị kachasị elu, profaịlụ backlink nke gụnyere njikọ "nofollow" na mgbe ihe odide arịlịka kachasị mma. Mpaghara niile na-esote nwere profaịlụ azụ azụ. O nwere ike ime ka ihe dị iche iche dị iche iche dịka mmemme spammy ma ọ bụ mmemme mmemme.
ejiriwo m backlinks ọkọollow na omume m, na-agbalị ịnweta ha sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị elu n'ụdị nkwupụta nke blog, njikọ, nhazi ederede na usoro njikọ njikọ ndị ọzọ. N'ihi ya, m nwetara ezigbo njikọ na mkpado "rel = nofollow. "Njikọ ndị a wetara ihe karịrị 100% abawanye na ọkwa ọkwa.
Ọ bụ ya mere m ga-eji kwuo na backlinks nke ala na ala nwere ike iwetara gị ụlọ ahịa. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka e si nweta ha. Ogo nchịkwa mara abụbanye na stereo na-arụ ọrụ zuru oke maka ịhazi njirimara nke njikọ kachasị mma.
Ihe a na-ekwu?
Ọ bụrụ na ị jụọ m ajụjụ a mgbe ị gwụchasịrị Google Penguin, m gaara ele gị anya dị ka n'oge ahụ onye ọ bụla na-achọ maka njikọ dị mma nke inbound.Otú ọ dị, mgbe oge na-agafe, a gbanwewo mmesi ike ahụ. N'oge a, ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-esepụta ihe ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụ ezie na ha enweghi njikọ dị mma ma nwee nnọọ njikọta spammy na amaokwu ndị na-ezo aka. Ọ bụ ya mere saịtị na ọtụtụ backlinks nwere ike ịnweta ihu n'akụkụ ndị ọzọ na ole na ole njikọ dị mma. N'afọ ndị gara aga, anyị ahụla nnukwu mmekọrịta na ọnụ ọgụgụ backlinks, ọ bụghị naanị àgwà ha, na-emetụta nnukwu ndị ahịa n'ahịa ndị TOP.
Ọzọkwa, o nwere ike iyi ihe dị iche, ma ka, inwe ọtụtụ njikọ site na otu ngalaba ahụ nwere ike inyere gị aka, na Google kwadoro ya. I nweghị ihe ize ndụ ịnweta ntaramahụhụ na ọbụna nwee ike irite uru na ya. Ọzọkwa, ọnụọgụgụ nke backlinks dịpụrụ adịpụ nwere ike inye aka mee mgbalị SEO dị ka ọ bụ nnukwu ihe na-eme ka ọ dị elu. Webmasters na-akpọkwa njikọ njikọ njikọ a "njikọ ọsọ ọsọ. "